Coronavirus အကြောင်းအမေးများသောမေးခွန်းများ | RayHaber | raillynews
၁။ Coronavirus အသစ် (1-nCoV) ကဘာလဲ။
Coronavirus အသစ် (2019-nCoV) သည်ဒီဇင်ဘာလနှောင်းပိုင်းတွင် Wuhan ပြည်နယ်ရှိအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ (အဖျား၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ အသက်ရှူမဝခြင်း) တွင်ရောဂါလက္ခဏာများကိုပထမဆုံးဖြစ်ပေါ်စေသောလူနာအုပ်စုတစ်စုတွင်သုတေသနပြုပြီးနောက် ၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့တွင်ဖော်ထုတ်နိုင်သည့်ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်သည်။ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုဤဒေသရှိပင်လယ်စာနှင့်တိရိစ္ဆာန်စျေးကွက်ရှိသူများတွင်အစပိုင်းတွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက်၎င်းသည်လူတစ် ဦး မှတစ် ဦး သို့ကူးစက်ပြီး Hubei ပြည်နယ်ရှိအထူးသဖြင့်ဝူဟန်နှင့်တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံရှိအခြားမြို့များသို့ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။
၂။ သင်၏ Coronavirus အသစ် (2-nCoV) ကိုဘယ်လိုကူးစက်သလဲ။
၎င်းသည်ဖျားနာသူများ၏နှာချေခြင်းဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပြန့်ကျဲနေသောအစက်များကိုရှူမိခြင်းကြောင့်ကူးစက်သည်။ လူနာများ၏အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအမှုန်များနှင့်ထိတွေ့သောမျက်နှာပြင်များကိုထိတွေ့ပြီးနောက်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည်ဆေးကြောခြင်းမခံရဘဲမျက်နှာ၊ မျက်လုံး၊ မျက်စိ၊ နှာခေါင်းနှင့်ပါးစပ်တို့ကိုညစ်ပတ်သောလက်များဖြင့်တို့ထိခြင်းသည်အန္တရာယ်များသည်။
၃။ Coronavirus ကူးစက်မှုအသစ်ကိုဘယ်လိုရောဂါပြသလဲ။
2019 အသစ် coronavirus ရောဂါအတွက်လိုအပ်သောမော်လီကျူးစစ်ဆေးမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့တိုင်းပြည်တွင်ရနိုင်သည်။ ရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးမှုကိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန၏အမျိုးသားဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါရည်ညွှန်းဓာတ်ခွဲခန်းတွင်သာပြုလုပ်သည်။
၄။ Coronavirus (4-nCoV) ကူးစက်မှုအသစ်ကိုကာကွယ်ရန်သို့မဟုတ်ကုသရန်အတွက်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးထိရောက်သောဆေးရှိပါသလား။
ရောဂါအတွက်ထိရောက်သောကုသမှုမရှိပါ။ လူနာ၏အထွေထွေအခြေအနေပေါ် မူတည်၍ လိုအပ်သောအထောက်အကူပြုကုသမှုကိုအသုံးပြုသည်။ ဗိုင်းရပ်စ်အပေါ်အချို့ဆေးဝါးများ၏ထိရောက်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။ သို့သော်လက်ရှိတွင်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုထိရောက်သောဆေးမရှိသေးပါ။
ပantibိဇီဝဆေးသည် coronavirus (5-nCoV) ကူးစက်မှုအသစ်ကိုကာကွယ်နိုင်ပါသလား။
မဟုတ်ပါ၊ ပantibိဇီဝဆေးများသည်ဗိုင်းရပ်စ်များကိုမထိစေပါ၊ ဗက်တီးရီးယားများကိုသာထိရောက်ပါသည်။ Coronavirus အသစ် (2019-nCoV) သည်ဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုး ဖြစ်၍ ကူးစက်မှုကိုကာကွယ်ရန်သို့မဟုတ်ကုသရန်ပantibိဇီဝဆေးများကိုမသုံးသင့်ပါ။
၆။ Coronavirus အသစ် (6-nCoV) ၏ပေါက်ဖွားသည့်ကာလသည်မည်မျှကြာသနည်း။
ဗိုင်းရပ်စ်၏ပေါက်ဖွားသည့်ကာလသည် ၂ ရက်နှင့် ၁၄ ရက်အကြားဖြစ်သည်။
၇။ Coronavirus အသစ် (7-nCoV) ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ရောဂါများသည်အဘယ်နည်း။
ရောဂါလက္ခဏာများမရှိဘဲဖြစ်ပွားမှုများရှိနိုင်ကြောင်းအစီရင်ခံထားသော်လည်း၎င်းတို့နှုန်းကိုမသိရှိရသေးပါ။ အဖြစ်များသောရောဂါလက္ခဏာများမှာအဖျားတက်ခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့်အသက်ရှူကျပ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ပြင်းထန်သောဖြစ်ရပ်များတွင်အဆုတ်ရောင်၊ ပြင်းထန်သောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရှူရှိုက်ခြင်း၊
၈။ Coronavirus အသစ် (8-nCoV) ကိုမည်သူ ပို၍ ထိခိုက်မည်နည်း။
ရရှိသောအချက်အလက်များအရအသက်အရွယ်ကြီးရင့်ခြင်းနှင့် (ဥပမာပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ၊ ဆီးချို၊ နှလုံးရောဂါ) ကဲ့သို့သောရောဂါများရှိသူများသည်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်နိုင်ခြေမြင့်မားသည်။ လက်ရှိအချက်အလက်များအရရောဂါဖြစ်ပွားမှု ၁၀-၁၅% နှင့်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏ ၂% ခန့်တွင်သေကြောင်းကြံစည်မှုတိုးတက်ကြောင်းသိရသည်။
၉။ Coronavirus (9-nCoV) ရောဂါအသစ်သည်ရုတ်တရက်သေဆုံးခြင်းကိုဖြစ်စေသလား။
ဖျားနာသူများနှင့်ပတ်သက်သည့်ထုတ်ပြန်ထားသောအချက်အလက်များအရဤရောဂါသည်အတော်လေးနှေးကွေးသောလမ်းကိုပြသနေသည်။ ပထမရက်အနည်းငယ်အနေဖြင့် (ဖျားနာခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ အားနည်းခြင်းစသည့်) ပျော့ညံ့သောတိုင်ကြားမှုများကိုတွေ့ရှိရပြီးချောင်းဆိုးခြင်းနှင့်အသက်ရှူကျပ်ခြင်းစသည့်လက္ခဏာများကိုထည့်သွင်းထားသည်။ လူနာများသည်ယေဘုယျအားဖြင့် (၇) ရက်အကြာတွင်ဆေးရုံသို့တင်ရန်အလုံအလောက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်လူမှုမီဒီယာပေါ်ရှိလူနာများအကြောင်းရုတ်တရက်ဖျားနာခြင်း၊ ဖျားနာခြင်းသို့မဟုတ်သေဆုံးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောဗီဒီယိုများသည်အမှန်တရားကိုမထင်ဟပ်ပါ။
အသစ်က coronavirus ရောဂါပိုးကူးစက်မှုခုနှစ်တွင် 10. တူရကီ (2019-NCover) မှအစီရင်ခံသည်တစ်ဦးအမှုရှိပါသလား?
မဟုတ်ပါ၊ နယူး Coronavirus (2019-nCoV) ရောဂါကိုကျွန်ုပ်တို့တိုင်းပြည်တွင် (၂၀၂၀၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၇၊ ၂၀၁၀ အထိ) မတွေ့ရသေးပါ။
၁၁။ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ (PRC) မှလွဲ၍ မည်သည့်နိုင်ငံများသည်ရောဂါကူးစက်ခံရနိုင်သနည်း။
ဤရောဂါကိုတရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတွင်အဓိကတွေ့ရသည်။ ကမ္ဘာ့အခြားနိုင်ငံများ၌တွေ့မြင်ရသောဖြစ်ရပ်များသည် PRC မှဤနိုင်ငံများအထိဖြစ်သည်။ အချို့နိုင်ငံများတွင် PRC မှနိုင်ငံသားအနည်းစုသည်ထိုနိုင်ငံ၏နိုင်ငံသားများနှင့်ကူးစက်ခံရသည်။ လက်ရှိအခြေအနေတွင်အိမ်တွင်းအမှုများလျင်မြန်စွာပျံ့နှံ့နေသည့် PRC မှလွဲ၍ အခြားနိုင်ငံမရှိပါ။ ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏သိပ္ပံဆိုင်ရာအကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့သည် PRC ကိုသာ“ မလိုအပ်လျှင်မသွားရန်” သတိပေးသည်။ ခရီးသွားများသည်အမျိုးသားနှင့်နိုင်ငံတကာအာဏာပိုင်များ၏သတိပေးချက်များကိုလိုက်နာသင့်သည်။
၁၂။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာနကဘာတွေလုပ်သလဲ။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများနှင့်နိုင်ငံတကာရောဂါပျံ့နှံ့မှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ကြီးဌာနမှအနီးကပ်စောင့်ကြည့်သည်။ Coronavirus အသစ် (2019-nCoV) သိပ္ပံဘုတ်ကိုဖန်တီးလိုက်ပြီ။ Coronavirus (2019-nCoV) ရောဂါအသစ်အတွက်အန္တရာယ်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်သိပ္ပံဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးများကျင်းပခဲ့သည်။ ဖြစ်ရပ်များမလိုက်နှင့်အစည်းအဝေးအပါအဝင်အားဖြင့်ပြဿနာ (အားလုံးသက်ဆိုင်သူများအဖြစ်တူရကီနယ်စပ်နှင့်ကျန်းမာရေး၏ Coastal ညွှန်ကြားမှုအထွေထွေပြည်သူ့ဆေးရုံများ, ပြင်ပဆက်ဆံရေးညွှန်ကြားမှု-အထွေထွေများအတွက်အရေးပေါ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများညွှန်ကြားမှုအထွေထွေအထွေထွေညွှန်ကြားမှု) ၏အားလုံးနှစ်ဖက်ပုံမှန်ပြုသောအမှုခံရဖို့ဆက်လက်မဟုတ်လျှင်။
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအထွေထွေ ဦး စီးဌာနအတွင်းရှိပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအရေးပေါ်စစ်ဆင်ရေးစင်တာတွင် ၂၄/၇ အခြေခံအားဖြင့်အလုပ်လုပ်သောအဖွဲ့များကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်တွင်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏အကြံပြုချက်များနှင့်အညီလိုအပ်သောကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ထားသည်။ လေဆိပ်နှင့်ပင်လယ်ဝင်ပေါက်များကဲ့သို့သောကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံ၏ ၀ င်ပေါက်ပေါက်များတွင်အန္တရာယ်ရှိသောဒေသများမှလာသည့်နာမကျန်းသောခရီးသည်များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်နှင့်ရောဂါသံသယဖြစ်လျှင်အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်ဆုံးဖြတ်ထားပါသည်။ PRC နှင့်တိုက်ရိုက်ပျံသန်းမှုကိုမတ်လ ၁ ရက်အထိရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။ PRC မှခရီးသည်များအတွက်စတင်တီထွင်ခဲ့သောအပူကင်မရာကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည့်အပလီကေးရှင်းသည် ၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့တွင်အခြားနိုင်ငံများသို့ပါတိုးချဲ့ခဲ့သည်။
ရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၊ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအမှု၌အသုံးပြုရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ထိန်းချုပ်ရေးအစီအမံများအတွက်လမ်းညွှန်ကိုပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ဖော်ထုတ်ဖြစ်ပွားမှုများအတွက်စီမံခန့်ခွဲမှု algorithms ကိုဖန်တီးခဲ့ကြသည်နှင့်ဆက်စပ်ပါတီများ၏တာဝန်နှင့်တာဝန်များသတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ ရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့နိုင်ငံတွေဆီကိုသွားမယ့်သူတွေလုပ်သင့်တဲ့လမ်းညွှန်မှာလည်းဒီလမ်းညွှန်ထဲမှာပါဝင်တယ်။ မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ၊ ပိုစတာများနှင့်လက်ကမ်းစာစောင်များအတွက်ဤလမ်းညွှန်နှင့်တင်ပြချက်များ၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်မှဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ထို့အပြင်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာနမူနာများကိုဖြစ်နိုင်ချေရှိသောရောဂါဖြစ်ပွားမှုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုလိုက်နာသူများထံမှရယူပြီးနမူနာရလဒ်မရရှိမချင်းကျန်းမာရေးအဆောက်အအုံအခြေအနေတွင်အထီးကျန်နေသည်။
အပူကင်မရာများသည်အဖျားရှိသူများကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၄ င်းတို့ကိုအခြားသူများမှခွဲထုတ်ခြင်းဖြင့်ရောဂါသယ်ဆောင်ခြင်းရှိမရှိထပ်မံစစ်ဆေးရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဖျားနာခြင်းမရှိဘဲလူနာများသို့မဟုတ်ပေါက်ဖွားမှုအဆင့်တွင်ရှိနေသေးသူများနှင့်ရောဂါမကူးစက်သေးသောသူများကိုရှာဖွေရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ သို့သော်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန်အသုံးပြုနိုင်သည့်အခြားမြန်ဆန်။ ထိရောက်သောနည်းလမ်းမရှိသေးသဖြင့်နိုင်ငံအားလုံးတွင်အပူကင်မရာများအသုံးပြုသည်။ အပူကင်မရာများအပြင်အန္တရာယ်ရှိသောfromရိယာမှခရီးသည်များကိုလေယာဉ်ပေါ်၌ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြင့်အသိပေးသည်။ နိုင်ငံခြားဘာသာဖြင့်ပြင်ဆင်ထားသောသတင်းအချက်အလက်ဘရိုရှာများကိုနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွင်ဖြန့်ဝေသည်။
၁၄။ Coronavirus (14-nCoV) ကာကွယ်ဆေးအသစ်ရှိသလား။
စူးရှသောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကူးစက်မှုများကူးစက်ခြင်း၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အဆိုပြုထားသောအခြေခံစည်းမျဉ်းများသည်နယူး Coronavirus (2019-nCoV) နှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားနေသောခေါင်းစဉ်:
- လက်သန့်ရှင်းရေးကိုစဉ်းစားသင့်သည်။ လက်များကိုဆပ်ပြာနှင့်ရေဖြင့်အနည်းဆုံးစက္ကန့် ၂၀ လောက်ဆေးကြောသင့်ပြီးဆပ်ပြာနှင့်ရေမရှိသောအခါအရက်ကိုအခြေခံသောလက်ဆန့်ဆေးကိုအသုံးပြုသင့်သည်။ ပိုးသတ်ဆေးနှင့်ပacterိဇီဝဆေးများနှင့်ဆပ်ပြာကိုအသုံးပြုရန်မလိုအပ်ပါ။ သာမန်ဆပ်ပြာသည်လုံလောက်ပါသည်။
- လက်ဆေးခြင်းမရှိဘဲပါးစပ်၊ နှာခေါင်းနှင့်မျက်လုံးတို့ကိုမထိရ။
- ဖျားနာသူများသည်အဆက်အသွယ်ကိုရှောင်ကြဉ်သင့်သည် (ဖြစ်နိုင်လျှင်အနည်းဆုံး ၁ မီတာအကွာတွင်ရှိလိမ့်မည်) ။
- လက်များကိုမကြာခဏဆေးကြောသင့်သည်။ အထူးသဖြင့်ဖျားနာသူများနှင့်သူတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ပြီးနောက်။
ယနေ့ခေတ်တွင်ကျန်းမာသန်စွမ်းသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်တွင်မျက်နှာဖုံးများအသုံးပြုရန်မလိုအပ်ပါ။ မည်သည့်ဗိုင်းရပ်စ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကူးစက်မှုမှမခံစားရသူသည်ချောင်းဆိုးခြင်းသို့မဟုတ်နှာချေခြင်းတွင်စက္ကူတစ်ချောင်းဖြင့်သူ၏နှာခေါင်းနှင့်ပါးစပ်ကိုဖုံးအုပ်ထားသင့်သည်။ အကယ်၍ စက္ကူတစ်သျှူးမရှိလျှင်အတွင်းပိုင်းတံတောင်ဆစ်ကိုသုံးပါ၊ လိုအပ်ပါကလူစည်ကားသောနေရာများသို့မ ၀ င်လျှင်၊ ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းကိုပိတ်ပါ။ အကြံပြုသည်။
- ဖြစ်နိုင်လျှင်၎င်းသည်ကျန်းမာရေးဌာနသို့လူနာများရောက်ရှိခြင်းကြောင့်မသွားသင့်ပါ။ ကျန်းမာရေးဌာနသို့သွားရန်လိုအပ်သည့်ကိစ္စများတွင်အခြားလူနာများနှင့်အဆက်အသွယ်လျော့ချသင့်သည်။
- ချောင်းဆိုးသောအခါနှာချေခြင်း၊ နှာခေါင်းနှင့်ပါးစပ်ကိုတစ်သျှူးစက္ကူများဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသင့်သည်။ တစ်ရှူးစက္ကူမရှိသည့်အခါတံတောင်ဆစ်၏အတွင်းပိုင်းကိုအသုံးပြုသင့်သည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင်လူစည်ကားသောနေရာများတွင်မထည့်သင့်ပါ။
- ကုန်ကြမ်းသို့မဟုတ် undercooked တိရိစ္ဆာန်ထုတ်ကုန်များစားခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။ ကောင်းမွန်စွာချက်ပြုတ်ထားသောအစားအစာများကို ဦး စားပေးသင့်သည်။
- ခြံများ၊ မွေးမြူရေးစျေးကွက်များနှင့်တိရိစ္ဆာန်များကိုသတ်ဖြတ်နိုင်သောနေရာများကဲ့သို့သောယေဘူယျရောဂါများအတွက်အန္တရာယ်များသောနေရာများကိုရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။
- အကယ်၍ ခရီးသွားပြီးနောက် ၁၄ ရက်အတွင်းမည်သည့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများမဆိုဖြစ်ပွားပါကအနီးဆုံးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဌာနသို့မျက်နှာဖုံးကိုဝတ်ဆင်သင့်ပြီးဆရာ ၀ န်၏ခရီးသွားလာရေးသမိုင်းကိုအကြောင်းကြားသင့်သည်။
- ချောင်းဆိုးခြင်းသို့မဟုတ်နှာချေခြင်းတွင်နှာခေါင်းနှင့်ပါးစပ်ကိုတစ်သျှူးစက္ကူဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသင့်သည်။ တစ်ရှူးစက္ကူမရှိသောအခါတံတောင်ဆစ်၏အတွင်းပိုင်းကိုအသုံးပြုသင့်သည်၊ ဖြစ်နိုင်လျှင်၎င်းကိုလူအစုအဝေးနှင့်နေရာများတွင်မထည့်သင့်ပါ။
- ချက်ပြုတ်ထားသောအစားအစာများသည်ကုန်ကြမ်းများထက် ပိုမို၍ စားသင့်သည်။
၁၈။ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်များမှ coronavirus ကူးစက်မှုအန္တရာယ်ရှိပါသလား။
၁၉။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်တွင် Coronavirus အသစ်စက်စက်ရောဂါရှိပါသလား။
ငါတို့နိုင်ငံမှာဖြစ်ရပ်တွေမရှိသေးဘူး။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိများစွာသောနိုင်ငံများကဲ့သို့ပင်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်တွင်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများဖြစ်နိုင်သည်။ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သည်ဤပြissueနာနှင့် ပတ်သက်၍ ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။
တရုတ်မှတိုက်ရိုက်ပျံသန်းမှုအားလုံးကို ၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်မှမတ်လ ၂၀ အထိရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။ ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏သိပ္ပံဆိုင်ရာအကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့သည် PRC ကိုသာ“ မလိုအပ်လျှင်မသွားရန်” သတိပေးသည်။ ခရီးသွားများသည်အမျိုးသားနှင့်နိုင်ငံတကာအာဏာပိုင်များ၏သတိပေးချက်များကိုလိုက်နာသင့်သည်။
ဤမော်တော်ယာဉ်များကိုလေ ၀ င်လေထွက်ကောင်းစေရန်နှင့်ပုံမှန်နှင့်အထွေထွေသန့်ရှင်းရေးကိုရေနှင့်ဆပ်ပြာဖြင့်ပြုလုပ်ရန်အကြံပြုပါသည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင်ယာဉ်များကိုတစ်ခုချင်းစီအသုံးပြုပြီးနောက်သန့်စင်သင့်ကြောင်းအကြံပြုသည်။
အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်းယာဉ်များကိုလေကောင်းလေသန့်ဖြင့်မကြာခဏလေဝင်လေထွက်အောင်လုပ်သင့်သည်။ မော်တော်ယာဉ်လေဝင်လေထွက်တွင်လေကိုပြင်ပမှလေနှင့်အတူအပူနှင့်အအေးပေးလိုသည်။ လေယာဉ်ပြောင်းလဲခြင်းကိုမသုံးသင့်ပါ။
စုပေါင်းရောက်ရှိလာသော Hotel ည့်သည်များ၏ဟိုတယ်၊ ဘော်ဒါဆောင်စသည်။ နေရာချထားရေးတာ ၀ န်ရှိသူများ ၀ န်ထမ်းများဖျားနာခြင်းအတွက်အန္တရာယ်ရှိပါသလား။
ခရီးဆောင်အိတ်များကဲ့သို့သောကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းများကိုသယ်ဆောင်လာသည့် ests ည့်သည်များသည်ဗိုင်းရပ်စ်သည်သက်မဲ့မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာရှင်သန်နိုင်ခြင်းမရှိသည့်တိုင်ကူးစက်ခံရခြင်း (ရောဂါပြန့်ပွားမှုအန္တရာယ်ရှိသည်) သို့မမျှော်လင့်ပါ။ သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအပြီးတွင်လက်ကိုချက်ချင်းဆေးကြောသင့်သည်သို့မဟုတ်လက်ဖြင့်အရက်အခြေပြုလက်ဆပ်လက်ဆေးဖြင့်ဆေးကြောသင့်သည်။
ထို့အပြင်ရောဂါပြင်းထန်သောဒေသများမှလာသည့် guests ည့်သည်များ၊ , ည့်သည်များအကြားဖျားခြင်း၊ နှာချေခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်းများရှိပါကဤပုဂ္ဂိုလ်နှင့်ယာဉ်မောင်းအတွက်ဆေးမျက်နှာဖုံးကိုဝတ်ဆင်ခြင်းသည်မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန်ဆေးမျက်နှာဖုံးကို ၀ ယ်သည်။ 112 ကိုခေါ်ပြီးသတင်းအချက်အလက်ပေးသည်သို့မဟုတ်ညွှန်ကြားထားသည့်ကျန်းမာရေးဌာနကိုကြိုတင်အကြောင်းကြားရမည်။
ရေနှင့်ဆပ်ပြာဖြင့်ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးသည်နေရာထိုင်ခင်းများတွင်လုံလောက်သည်။ လက်များ၊ တံခါးလက်ကိုင်များ၊ ဘက်ထရီများ၊ လက်ကိုင်များ၊ အိမ်သာနှင့်စုပ်ယူသည့်သန့်ရှင်းရေးတို့ကမကြာခဏထိတွေ့လေ့ရှိသောမျက်နှာပြင်များကိုအထူးဂရုပြုသင့်သည်။ ဤဗိုင်းရပ်စ်ပိုးအတွက်အထူးထိရောက်သည်ဟုဆိုသောထုတ်ကုန်များစွာကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အပိုအကာအကွယ်ပေးသည်ဟုသိပ္ပံနည်းကျအထောက်အထားမရှိပါ။
လက်သန့်ရှင်းရေးကိုအာရုံစိုက်သင့်သည်။ လက်များကိုဆပ်ပြာနှင့်ရေဖြင့်အနည်းဆုံးစက္ကန့် ၂၀ လောက်ဆေးကြောသင့်ပြီးဆပ်ပြာနှင့်ရေမရှိသောအခါအရက်ကိုအခြေခံသောလက်ဆန့်ဆေးကိုအသုံးပြုသင့်သည်။ ပိုးသတ်ဆေးနှင့်ပacterိဇီဝဆေးများနှင့်ဆပ်ပြာကိုအသုံးပြုရန်မလိုအပ်ပါ။ သာမန်ဆပ်ပြာသည်လုံလောက်ပါသည်။
မည်သည့်ဗိုင်းရပ်စ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကူးစက်မှုမှမခံစားရသူသည်ချောင်းဆိုးခြင်းသို့မဟုတ်နှာချေခြင်းတွင်စက္ကူတစ်ချောင်းဖြင့်သူ၏နှာခေါင်းနှင့်ပါးစပ်ကိုဖုံးအုပ်ထားသင့်သည်။ အကယ်၍ စက္ကူတစ်သျှူးမရှိလျှင်အတွင်းပိုင်းတံတောင်ဆစ်ကိုသုံးပါ၊ လိုအပ်ပါကလူစည်ကားသောနေရာများသို့မ ၀ င်လျှင်၊ ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းကိုပိတ်ပါ။ အကြံပြုသည်။
၂၆။ စားသောက်ဆိုင်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များမှလာသည့်စားသောက်ဆိုင်များနှင့်စျေးဆိုင်များတွင် ၀ န်ထမ်းများမည်သို့ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်သင့်သနည်း။
ရေနှင့်ဆပ်ပြာဖြင့်ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးသည်မျက်နှာပြင်သန့်ရှင်းရေးအတွက်လုံလောက်ပါသည်။ တံခါးလက်ကိုင်များ၊ faucets များ၊ လက်ကိုင်ပုဝါများ၊ အိမ်သာနှင့်စုပ်မျက်နှာပြင်များကိုလက်ဖြင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းကိုအထူးဂရုပြုသင့်သည်။ ဤဗိုင်းရပ်စ်ပိုးအတွက်အထူးထိရောက်သည်ဟုဆိုသောထုတ်ကုန်များစွာကိုအသုံးပြုခြင်းသည်နောက်ထပ်ကာကွယ်မှုကိုပေးသည်ဟုသိပ္ပံနည်းကျအထောက်အထားမရှိပါ။
ချောင်းဆိုးခြင်းသို့မဟုတ်နှာချေခြင်းတွင်နှာခေါင်းနှင့်ပါးစပ်ကိုတစ်သျှူးစက္ကူဖြင့်ဖုံးအုပ်ရန်အကြံပြုသည်။ အကယ်၍ တစ်သျှူးများမရလျှင်လူစုလူဝေးသောနေရာများသို့မဝင်ရန်အတွင်း၌တံတောင်ဆစ်ကိုသုံးပါ။
၂၈။ ကျွန်ုပ်၏ကလေးကိုကျောင်းသို့ပို့နေပါပြီ၊ Coronavirus (28-nCoV) အသစ်ကူးစက်ခံနိုင်ပါသလား။
coronavirus ကူးစက်မှုအသစ် (2019-nCoV) ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်စတင်တွေ့ရှိခြင်းမရှိသေးပါ။ ယနေ့အထိကျွန်ုပ်တို့တိုင်းပြည်အတွင်း၌ရောဂါကူးစက်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်လိုအပ်သောဆောင်ရွက်မှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သင်၏ကလေးသည်ကျောင်း၌တုပ်ကွေး၊ အအေးမိခြင်းနှင့်အအေးမိစေသည့်ဗိုင်းရပ်စ်များကိုကြုံတွေ့ရနိုင်သော်လည်း Coronavirus (2019-nCoV) အသစ်သည်စောင်ရေထဲ၌မရှိသောကြောင့်၎င်းနှင့်မတွေ့နိုင်ပါ။ ဤအခြေအနေတွင်ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှလိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုကျောင်းများသို့ပေးအပ်ခဲ့သည်။
ကျောင်းများသန့်ရှင်းရေးအတွက်ရေနှင့်ဆပ်ပြာဖြင့်ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်လုံလောက်သည်။ တံခါးလက်ကိုင်များ၊ faucets များ၊ လက်ကိုင်ပုဝါများ၊ အိမ်သာနှင့်စုပ်မျက်နှာပြင်များကိုလက်ဖြင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းကိုအထူးဂရုပြုသင့်သည်။ ဤဗိုင်းရပ်စ်ပိုးအတွက်အထူးထိရောက်သည်ဟုဆိုသောထုတ်ကုန်များစွာကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အပိုအကာအကွယ်ပေးသည်ဟုသိပ္ပံနည်းကျအထောက်အထားမရှိပါ။
၃၀။ စာသင်ချိန်နားချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်တက္ကသိုလ်သို့ပြန်လာပြီးကျောင်းသားနေအိမ်တွင်နေထိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် Coronavirus (30-nCoV) ရောဂါအသစ်ရရှိနိုင်ပါသလား။
coronavirus ကူးစက်မှုအသစ် (2019-nCoV) ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်စတင်တွေ့ရှိခြင်းမရှိသေးပါ။ ယနေ့အထိကျွန်ုပ်တို့တိုင်းပြည်အတွင်း၌ရောဂါကူးစက်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်လိုအပ်သောဆောင်ရွက်မှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
တုပ်ကွေးရောဂါသည်အအေးမိခြင်းနှင့်အအေးမိခြင်းကိုဖြစ်စေသည့်ဗိုင်းရပ်စ်များကိုတွေ့နိုင်သည်။ သို့သော် Coronavirus (2019-nCoV) အသစ်သည်စောင်ရေထဲ၌မရှိသောကြောင့်၎င်းကိုမမျှော်လင့်နိုင်ပါ။ ဤအခြေအနေတွင်ရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုအဆင့်မြင့်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ချေးငွေအဆောင်ဌာနနှင့်အလားတူကျောင်းသားများကအဆောင်များမှပေးခဲ့သည်။
၃၁။ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များသည် Coronavirus အသစ် (31-nCoV) ကိုသယ်ဆောင်။ ထုတ်လွှင့်နိုင်ပါသလား။
အိမ်မွေးကြောင်များ၊ ခွေးများကဲ့သို့သောအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များသည် Coronavirus (2019-nCoV) နှင့်ကူးစက်ခံရလိမ့်မည်ဟုမမျှော်လင့်ပါ။ သို့သော်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက်လက်ကိုဆပ်ပြာနှင့်ရေဖြင့်အမြဲဆေးကြောသင့်သည်။ ထို့ကြောင့်တိရိစ္ဆာန်များမှကူးစက်နိုင်သောအခြားကူးစက်မှုများမှကာကွယ်မှုကိုပေးလိမ့်မည်။
၃၂။ သင်၏နှာခေါင်းကိုဆားရည်ဖြင့်ဆေးခြင်းက Coronavirus (32-nCoV) ကူးစက်မှုအသစ်ကိုကာကွယ်နိုင်ပါသလား။
အမှတ် နှာခေါင်းကိုဆားရည်ဖြင့်ပုံမှန်ဆေးကြောခြင်းသည် Coronary virus (2019-nCoV) ကူးစက်မှုမှကာကွယ်ရန်အသုံးဝင်သည်။
ရှာလကာရည်သည် coronavirus (33-nCoV) ကူးစက်မှုအသစ်ကိုကာကွယ်နိုင်ပါသလား။
အမှတ် နယူး Coronavirus (2019-nCoV) မှကူးစက်ခြင်းကိုတားဆီးရာတွင်ရှလကာရည်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အသုံးမဝင်ပါ။
မကြာခဏ IRIS ၏ certificates ကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေး
အဘယျမေးခှနျးမြားဝန်ကြီး Yildirim မှမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထား file သွားကြသလဲ
ပါလီမန်၏ဖော်ပြချက်မှ Related Btk ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာများ
အလင်းရထားပို့ဆောင်ရေးစနစ်စီမံကိန်း Related လုပ်ငန်းခွင်ပွုလုပျခွငျးနှစျခုအမျိုးမျိုးကုမ္ပဏီများ
တစ်သုတျနှင့်အတူBurulaşမှ General Manager Fidansoy ဆက်စပ်သတင်းအချက်အလက်ပြင်ဆင်ခြင်း
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Kadir ဗန်Topbaşအားဖြင့် Related အလွန်အရေးကြီးဖော်ပြချက် ''
မြို့တော်ဝန် Kocaoglu, ပို့ဆောင်ရေး Related မေးခွန်းများအဖြေများအစ်ဂျီးယန်းတီဗီ၌ရှိ၏
Kılıçdaroğlu'nun Kadıköy- လင်းယုန်၏မြေအောက်ရထားကကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုသည်။
Darıca Gebze Metro လေ့လာမှုကြောင့်ယာယီလမ်းကြောင်းလျှောက်လွှာ